Unofanira kuzvitarisira sei paunenge uchienda kumahombekombe | Bezzia
Maitiro aunofanira kuzvitarisira iwe kana uchienda kumahombekombe
Iyo mwaka wegungwa uye isu tinopinda panguva apo kutarisirwa kwezuva nezuva kunochinja, zvese paganda redu uye nebvudzi redu. Zvakajairika kuti isu tinetseke nezve zuva muzhizha, asi pane zvimwe zvinhu zvinogona kuve zvakakosha kana tichida kusvika mumwaka mukuru wematsutso, tichidzivirira kusaregeredza pachedu panguva yezororo regungwa. Saka tiri kuzokupa matipi mashoma ekuzvitarisira kana uchienda kumahombekombe.
A anenge munhu wese anofarira mahombekombe, asi kana tikapedza mazuva mashoma tiri pazororo tinowanzo regedza maitiro edu, nekuti tinozorora tovakanganwa kana kusatakura zvigadzirwa zvese. Zvisinei, pamazuva ano ndipo patinofanira kungwarira zvikuru kuti tidzivise matambudziko pakupera kwezororo.
1 Iwo mahombekombe anotarisa zvinhu
2 Vhara musoro wako
4 Kunyorovesa ganda
5 Usaratidze zvakanyanya kune zuva
Iwo mahombekombe anotarisa zvinhu
Dzimwe nguva tinoenda kumahombekombe nezvinhu zvina uye hatinetseke zvakanyanya nezve zvatakatakura. Asi zvipfeko zvinogona zvakare kutibatsira kuzvitarisira isu mumamiriro ezvinhu aya. Zvinokurudzirwa kupfeka mbatya dzedonje nekuti dzinodikitira uye nekudaro isu tinodzivirira kusagadzikana kweganda nekuda kwekupisa uye ziya. Hembe dzakasununguka ndidzo dzakanakisa mune iyi pfungwa, nekuti kana aya akakwenya akatibata, anogona kukonzera kutsvuka nekushatirwa. Kana tine makumbo makobvu, zvakakosha kupfeka bhurugwa kuti tirege kuchaya munzvimbo ino zvakare. Chinhu chakanaka kupfeka hembe inovhara mapendekete edu, nekuti idzi dzinowanzotsva nyore.
Vhara musoro wako
Ichi chikamu chakakosha kwazvo. Kana tikapfeka ngowani ine brim rakapamhamha kana chivharo tinovhara musoro nemeso. Izvi hazvingodziviriri chete kutemwa nemusoro kubva kuzuva, asi zvakare ichadzivirirawo mudzi nemusoro kupisa kwezuva. Pamusoro pezvo, kuvhara kumeso kunoita kuti zuva risanyanye kukurudzira uye tinodzivirira kuchembera kunouya kubva mukuratidzwa kwenguva refu nemwaranzi yezuva. Chero zvazvingaitika, kupfeka ngowani yakanaka kunogara kuri kubudirira.
Kune mazano mazhinji akasiyana pamusoro penguva uye sei kushandisa sunscreen. Inogona kuiswa usati waenda kumahombekombe nekuti nenzira iyoyo tinodzivirirwa kana tichifanira kufamba muzuva kusvika tasvika pariri. Asi zvakare izano rakanaka kuzora mafuta ezuva mushure mokusvika, nekuti nedikita nekukwiza kwembatya zvinokwanisika kuti chikamu chemugumisiro wacho charasika. Chero zvazvingava, unofanirwa kurishandisa nguva nenguva nekuti nemvura nedikita zvinowanzoita kuti zvisaite uye tinogona kupiswa nyore.
Mushure me kumahombekombe isu tinofanirwa kugara tichitarisira ganda redu. Iwe unofanirwa kuidirisa yakawanda, zvese mukati, kunwa mvura, uye nekunze, kuisa yakanaka moisturizer. Izvi zvakakosha nekuti nezuva nekudikitira ganda rinorasikirwa nemvura, izvo zvinodiwa kuti ugare wakanaka. Ganda rine hydrated rinogara richitaridzika zvirinani, riri mudiki uye rakatsetseka Shandisa mafuta anovaka muviri uye akareruka muzhizha, uchidzivirira iwo ane maoiri nekuti anorema.
Usaratidze zvakanyanya kune zuva
Zvakakosha kuva pakati nepakati maererano nekuratidzwa kwezuva. Izvo hazvibatsire chete kuburitsa gomarara regandaAsi zvakare inotikura isu nguva isati yakwana. Ndokusaka tichikukurudzira kuti ugare uchitakura amburera kana uchienda kumahombekombe kuitira kuti ugone kuve mumumvuri uye uzvidzivirire neheti kana zvipfeko zvakasununguka. Chimwe chinhu chakakosha kudzivirira maawa apo zuva rinorova zvakanyanya, anova ndiwo epakati maawa ezuva. Izvi zvinodzivirira kupisa uye kupisa kwakanyanya, izvo zvisina kunaka futi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Runako » Maitiro aunofanira kuzvitarisira iwe kana uchienda kumahombekombe
Matipi ekudzivirira matambudziko ekugaya muzhizha
Maitiro ekugadzirisa kurwisa kwekushushikana